समाचार Archives - Page 252 of 258 -
Saturday December 14, 2019 |
सुरुङ्गा, झापा, २७ मंसिर (रासस) : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (एमाले) की पवित्रा निरौला खरेल मेची अञ्चलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ली महिला बन्नुभएको छ । मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं २ बाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो । योसँगै उहाँले नेपाली काँग्र...
मेडिकल माफिया ठाकुर चुनावअघि नै निराश बने, प्रचारका लागि कार्यकर्ता पाउन छाडे
सप्तरी । मेडिकल माफियाको छवि बनाएका निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का स्वतन्त्र उम्मेदबार जयप्रकाश ठाकुर चुनाव अघिनै निराश बनेका छन् । मंसिर २१ गतेको चुनाव आउन पाँच दिन बाँकी छँदै पराजयको डरले उनी हतास बनेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि चुनावी माहोल दिनप्रतिदिन बिग्रिदै गएपछि ठाकुरले आफ्ना निकटका कार्यकर्ताहरुसँग निराशा समेत पोख्न...
काठमाडौं । वाम गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदबार उमेश कुमार यादवले सिंचाई मन्त्री हुँदा ४२ लाख कुम्ल्याएको घुसकाण्ड यतिबेला फेरि चर्चामा छ । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदबार रहेका उमेशको क्षेत्रमा त्यो घुसकाण्ड चर्चाको बिषय बनेको हो । एक वर्षअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सिंचाई...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनका इन्चार्ज बिसी पक्राउ
चितवन, ४ मंसिर । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनका जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर बिसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रबाट बिसीलाई आइतबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभु ढकालले जानकारी दिनुभयो । चुनावी कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने कार्यहरु बढ्द...
प्रतिनिधि सभा २५ लाख र प्रदेश सभा १५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने:प्रवक्ता नवराज ढकाल
काठमाडौं । चुनावमा उम्मेदवारले खर्चगर्न पाउने सीमा समयसँगै बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारलाई चुनाव खर्चालु हुनबाट जोगाउन तोकेको अधिकतम सीमा प्रत्येक निर्वाचनमा थपिँदै आउँदा ६० वर्ष पछि त्यो सीमा ५०० गुणा बढी हुन आएको छ । नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव २०१५ सालमा भएको हो । त्यतिबेला न...
पूर्व राष्ट्रिपति यादवलाई घरधनीले दिए घरखाली गर्न अन्तिम सूचना
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले बस्ने वास नपाएर दुःख पाउँदै आएका छन् । सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिको वासका लागि यथोचित व्यवस्था गर्ने बताए पनि उपयुक्त स्थल नहुँदा डा यादवले मानसिक रुपमा पीडा खेप्दै आएका छन् । यादवलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बागडोल...
सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प जाँदा काठमाडाैंमा धक्का